Siyaqhubeka isiteleka samabhasi eKapa | News24
Siyaqhubeka isiteleka samabhasi eKapa
Cape Town - Isiteleka samabahsi akwaMyCiti singenelele osukwini lwesithupha eKapa, ngoMsombuluko, kusho abedolobha.
"Iziphathimandla zezokuthutha eKapa zisiqaphe ngelokhozi isimo njengoba kuqhubeka isiteleka sabashayeli samabhasi abangaphansi kwe-SA Transport and Allied Workers Union abaqashwe yinkampani iTranspeninsula Investments (TPI)," kusho ilungu lekomidi leMeya lezokuthutha uBrett Herron esitatimendeni.
"Sibonge usizo esiluthole kwezinye zezinkampani zakwaMyCity nabashayeli abangaphansi kwenkampani iTPI abangasingenelanga isiteleka futhi abangasiyo ingxenye yenyunyana iSATAWU okwenze ukuba isiteleka silawuleke," usho njalo.
OLUNYE UDABA: Kuhlaselwe amabhasi akwaMyCiti eKapa
Selokhu kwaqala isiteleka ngoLwesithathu ntambama yonke imizila ehleliwe kusukela phakathi kwe-T01, iCivic Centre, iTable View, iDunoon nalowo obheke enkundleni yezindiza ihamba njengokujwayelekile.
"Azikho izigemegeme zodlame ezibikiwe ngempelasonto."